Wiil Dabin uu u Dhigay Gabar Soomaaliyeed Ay Walaashiis Ku Dhacday – Sheeko yaab leh oo cibro qaadasho mudan! |
Fatahaadaha Iyo Saameynta Caafimaad
Ilhaan Ciise Maxamed, June 19, 2018
Waa Maxay Farqiga u Dhaxeeyo Siyaasi Iyo Hoggaamiye?
Cabdijabaar Sh. Axmed, February 11, 2017
Maskaxdaadu Waa Hantida Ugu Fiican Ee aad Haysato
Waa Maxay Soonka Bisha Ramadaan?
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor, May 30, 2018
Wiil Dabin uu u Dhigay Gabar Soomaaliyeed Ay Walaashiis Ku Dhacday – Sheeko yaab leh oo cibro qaadasho mudan!
Kismaayo ayey ka dhacdaye, goor galab ah ayaa wiil iska socda waxa uu dariiq uga soo horbaxay gabar aad ula qurxoonayd. Inta faduuliyey ayuu inta bartay, ka qaatay taleefoonkeeda. Dhawr jeer buu la soo hadlay oo ay si fiican inta isku sii barteen, kolkaas ku ballameen maalin, in ay mar kale is arkaan.
Gabadhu, waxa ay ahayd gabar wanaagsan oo Allahayd Alle yahay, isagu se waxa uu ekaa faddar rabbi iyo islaan ka furtay. Iyadu waa gabar ragga ula sheekeysata oo keliya in, kii ay ka hesho oo calaf u galo ay guursato, laakiin isagu waxa uu gabdhaha ula haasaawaa in uu ka leeddoraaco.
Maalintii koowaad ee ay ballameen, waxay isku arkeen beerta xorriyadda. Aad buu uga helay quruxda gabadhaas Alle huwiyey iyo labeenta korkeeda ka muuqatay ee laga subkan karo. Waa 18 jir inta qoortahay ayey misena jir ahaanna buuxdaa. Midabku waa guduud caddaan xigeen ah, oo meelaha qaar xididdada ayaa ka muuqanaya. Marka ay indhashareerka iska fayddo, indhaha balaca ah, sandqoorka dheer, sunniyaha qaansoroobaadka u eg, bishimaya guduudan, oo tan hoose dhexda ka yara saran tahay iyo marka ay dhoollacaddaynayso ilkaha cad ee is la’eg, camanka bucbuca ah iyo horaaddada xooggan oo cabbayaddeeda in ay soo taraarayaan la moodayo, ayaad marka aad aragto inta dubaaxiso xaaddu, inta wax dareenta oo dhan bilaa amar la’aan istaagayaan. Markaas baad is oronaysaa yaaba gabigeeda liqa. Quruxda gabadhaasi wiilkii isha waa siin waayey. Xoogaa baa la sii sheekeystay, oo nus saac ka dib la is macasalaameeyey.
Markii ay kala tageen ayaa wiilkii waxa uu go’aan ku gaaray sidii uu gabadhaasi uu ku soo xero gelin lahaa – oo guur kama rabee – dabadeed uu inta nicmatulfashuuqaas dhex tiimbado uu ka faramacaysto. Waxyaalo badan ayuu inta isku dhufsaday, ayuu gabadhii xargo u daadiyey. Wax welba oo gabar lagu soo jiidan karo waa sameeyey, laakiin si kasta inta sameeyey ayuu waxa uu ka waayey, in ay u dhiibto oo kabbiso hal mar, illeen dantiisu waa taase. Taas maxaad ka sheegaysaa, xitaa salaax waa ka waayey e. Iyadu wax aan xalaal ahayn in aan xuubkeeda lagu dillaacin ayey Alle horey uga ballanqadday, oo taas bay ku taagan tahay. Hayin ma ahoo, far la ma saari karo oo, haddii loo soo dhawaado inta buubto bay baabacaynaysaa. Waagii dambe, markii ay aragtay saqajaannimadiisa, bay is araggiisii goysay. Markii uu wakhti badan inta geliyey uu ka samray, buu waxa uu go’aan ku gaaray in uu u dhigo dabin sharafteeda dilaya.
Markaas Kismaayo malleeshiyo ayaa xukumaysaye, dhallinyaro mooryaan ah ayuu inta diyaariyey, buu waxa ka dhaadhiciyey in gabar wakhti badan oga khasaaray, oo xumaysay ay uga aaraan, oo inta u ballamiyo ay kufsadaan. Yeele. Dhallinyaradii guri ay ku qaliyaan oo iyaga u gaar ah oo uu isna ugu tagtago mar mar, ayuu gabadhii – oo yaa Allahu ku yeeshay – ku ballamiyey inta maalintaas aad iyo aad u baryey oo isku oohiyey in ay la kulanto, isaga oo u tilmaamay gurigii, oo ay si fiicna u garatay. Nimankiina, waxa uu ku yiri, “taleefoonka waan dansanayaaye, gabadha guriga soo garaacda xilligaas, ka fura, oo qol inta gelisaan saf ka mara doofaarta”.
“Haye” bay dheheen. Gabadhii waa ballamiyey goor galab ah 4:00 PM, markii xilligii la gaarayna taleefoonkii waa dansaday.
Wiilkaas hooyadiis baa galabtaas lagu soo booday, oo fadhi iyo jiif ka tagtay, markaas baa loo baahday wiilkii. Gabar walaashiis ah oo ka yar baa wacday, markaas bay heli wayday maaddaama uu taleefoonkiisu dansanaa. Meel kasta ayey ka raadisay, markaas baa mar dambe loo sheegay meesha ugu dhaw ay ka heli karto in uu yahay guri uu mar mar tago, oo uu qaad kula dhuunto. Gurigii oo loo tilmaamay bay isku sii daysay, markii laga furayba oo ay magaciisa weydiisay ba, la ma aqoon oo, tii baa inta loo qaatay, “Soo gal” la yiri. Qolkii markii la geeyeyba, inta gaddac loo tuuray baa saf laga maray.
Iyada oo dhiig ka falaq leeyahay, ayey gurigii ka soo baxday, markaas baa waxaa irridka uga hortimid gabadhii oo inta labbis iyo is qurxis ku soo yara daahday, laafyoonaysa. Gabadhan oo gaggabaysa oo ooyeysa ayey illinka kula kulantay, “Bisinka! Maxaa kugu dhacay abbaayo”, “Niman gurigaan aad u socotid ku jira ayaa i kufsaday ee ka carar” bay tiri iyada oo ooyeysa. Markii gabadhii ogaatay gurigii ay u socotay in uu yahay meel kusfi, inta big tiri ayey cagaheedii maashay.
Tags: Wiil Dabin uu u Dhigay Gabar Soomaaliyeed Ay Walaashiis Ku Dhacday - Sheeko yaab leh oo cibro qaadasho mudan!
Next post Urur Qarsoon oo La Yiraahdo ‘URURKA DUMINTA QOYSKA IYO KA HORTAGGA GUURKA’ oo Soomaaliya Ka Askumay - Xog iyo xuuraan muhiim ah
Previous post Gabadhii Caqliga Badnayd!